लोकप्रियतावादी राष्ट्रवादबाट सिकिने पाठ - Karobar National Economic Daily
लोकप्रियतावादी राष्ट्रवादबाट सिकिने पाठ
query_builderFebruary 26, 2017 9:58 PM supervisor_accountकारोबार संवाददाता visibility348
किन लोकप्रियतावादीहरू भूमण्डलीकरणको विरुद्धमा प्रतिक्रिया दिन्छन् ? विगतका तीन दशकमा भूमण्डलीकरणले उदीयमान अथतन्त्रका करोडौं मानिसलाई गरिबीबाट माथि उकासेको छ र व्यापार र विश्व आर्थिक वृद्धिलाई चम्काएको छ ।
तर, केही समयान्तरमै भूमण्डलीकरणबाट समस्या जन्मन र बढ्न सुरु भयो । सस्ता ठाउँमा उद्योग स्थानान्तरण भएका कारण रोजगारीमा क्षय, बढ्दो असमानता र स्वतन्त्र पुँजी प्रवाह अविकसित देशहरूतिर हुनुजस्ता समस्या बढ्न थाले ।
सांस्कृतिक विचलन र राष्ट्रिय पहिचानजस्ता मनोवैज्ञानिक असर पनि देखा परे । यी सबैमाझ मध्यम र कामदार वर्गमा देखा परेको असन्तोषलाई बेवास्ता गर्दै राजनीतिक सम्भ्रान्तहरू सानसौकत र नाफामा केन्द्रित हुन थालेका छन् । भूमण्डलीकरणका नकारात्मक प्रभावलाई बढी चर्चा गरियो । हाल सम्भ्रान्तविरुद्ध र लोकप्रियतावादी राष्ट्रवादको प्रतिक्रिया विस्फोट गरायो ।
२००८ मा अमेरिकामा देखा परेको महामन्दी संक्रमणकालको सुरुवात थियो । यसमा २ अर्बभन्दा बढी मानिसले रोजगारी र आवास गुमाए, जसले अमेरिकामा वित्तीय संकट बढायो । त्यही बेला दुईवटा युद्ध लड्न प-यो, जसमा २ खर्ब डलर खर्च भयो र बजेट घाटा भयो ।
यसले अमेरिकी संस्था र राजनीतिक अभिजातहरूविरुद्ध विद्रोहको भाव सुरु भयो । गोरा बाहुल्य र अंग्रेजी नबोल्ने मानिसको जनसंख्या परिवर्तनले अमेरिकामा पहिलोपल्ट काला राष्ट्रपति चुनिए । मध्यम वर्गको स्थिरता, बढ्दो असमानताले लोकप्रियतावादी व्रिदोह जन्मायो ।
मध्यमवर्गीय गोराहरूले रोजगारीमा क्षय र व्यापारमा आप्रवासीलाई खलनायकका रूपमा लिए । हालैको अध्ययनले के देखाएको छ भने २००० यता प्रविधि र अटोमेसनका कारण १० मा ९ वटा रोजगारी गुम्यो, व्यापारका कारण होइन ।
२०१४ यता अमेरिकाबाट मेक्सिकोतर्फ लगानी प्रवाह भयो, जसलाई रोजगारी गुमाउनुको कारण भनी ट्रम्पले आरोप लगाए । वास्तवमा यो नै उत्तरी अमेरिकी अर्थतन्त्र निर्माणमा सकारात्मक शक्ति थियो । तर, यो संवेगको कुरा हो, तर्कको होइन । यसैलाई ट्रम्पले चतुरतापूर्वक आफ्नो पक्षमा व्याख्या गरे ।
युरोपमा, खास गरी दक्षिणी युरोपमा वामपन्थी र दक्षिणपन्थी लोकप्रियतावादी राष्ट्रवाद चम्किनुका कारण थुप्रै छन् । औसत आर्थिक वृद्धिले बेरोजगारी बढायो । ईयूले राष्ट्रिय पहिचानलाई किच्यो र ब्रसेल्सका अपरिचित अनुहारले आफ्नो भाग्य लेख्न थाल्यो ।
ईयूभित्र स्वतन्त्र कामदार प्रवाह हुँदा बेलायतमा मुस्लिम आप्रवासीको संख्या बढ्न थाल्यो । यसले सांस्कृतिक भय र क्रोध बढायो । परिणामतः यसले सर्वसत्तावादी शासनको संख्या बढायो । यसको उदाहरण हंगेरी हो ।
ब्रेक्जिटको यही सन्देशझैं फ्रान्समा मारिन ले पेनको उदय भएको छ, नेदरल्यान्ड र जर्मनीमा पनि त्यस्तै भएको छ । दोस्रो विश्वयुद्धपछि युरोपमा नयाँ पुस्ता हुर्कियो, जसलाई शताब्दीयौं लडाइँ र विनाशबाट युरोपको एकीकरण जन्मिएको र राष्ट्रवाद र संरक्षणवादले जन्माएको युद्धलाई रोक्न सुरु भएको ब्रिटन वुड्स प्रणालीबारे याद छैन ।
विश्वयुद्धका कारण भूमण्डलीकरणको पूर्वयुग रोकियो, जुन राष्ट्रवाद र संरक्षणवादबाट पीडित थियो । यसको विकल्पमा जाँदा आर्थिक अस्वस्थता र द्वन्द्व निम्तिन्छ । यदि ट्रम्पले संरक्षणवादी नीति लिन्छन् भने १९३० मा जस्तै व्यापार युद्ध हुन सक्छ ।
नियममा आधारित विश्व व्यापार संगठनजस्ता संस्थाहरू जसले शान्ति र अभूतपूर्व आर्थिक समृद्धि निम्त्याए, तिनीहरू भताभुंग हुने दिशातिर उन्मुख छन् । यी लोकप्रियतावादीहरूको रिस कता पोखिएको छ त ?
सहज वा चित्तबुझ्दो जवाफ छैन । केहीका विचारमा यो चक्रीय हुन्छ, जुन पेन्डुलझैं बहुपक्षीय सहयोगतर्फ फर्किन्छ । यदि यसो हो भने भूमण्डलीकरणले दिएका पीडाको सम्बोधन हुनुपर्छ ।
पुनर्तालिम, बेरोजगारी बिमा, स्वास्थ्योपचार आदि सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध गराइनुपर्छ । पुस्तान्तरणले यस्तो परिवर्तनलाई उल्ट्याउन सक्छ । १९९० देखि २००० सम्म जन्मिएका व्यक्तिहरूमा बढी सहनशीलता र अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टि पाइन्छ ।
त्यसैले ट्रम्पलाई मतदान गर्नेहरू गोरा र ४५ वा सोभन्दा बढी उमेरका थिए । तिनीहरू चाँडै नै नयाँ पुस्ताद्वारा विस्थापित हुनेछन् । तर, अहिले भने आँधीबेहरी जारी रहन्छ ।
रोबर्ट ए मानिङ